चैत ९ गते देखी बलेवा-काठमाडौ-बलेवा नियमित बिमान सेवा सन्चालनमा आउने !बागलुङ नगरपालिका र दुई बिमान कम्पनिबीच भएको सम्झौताले के भन्छ ? बिमानसेवा कसको हितमा ? – ebaglung.com
२०७४ चैत्र ७, बुधबार २१:३२	Footer Slider, Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार
डम्मर बुढा मगर, बागलुङ २०७४ चैत ७ । चैत ९ गते देखी काठमाडौ बलेवा काठमाडौ बिमान सेवा सन्चालन हुने भएको छ । गत चैत ५ गते बलेवा विमानस्थलमा परीक्षण उडान पछी तारा एअरलाईन्सले पर्सि बिहीबार नियमित उडान सुरु गर्ने भएको हो । यस अघि २०७४ साल फागुन २३ गते बुधवार बागलुङ नगरपालिका तथा तारा एयर प्रालि र नेपाल वायुसेवा निगम वीच उडान भर्ने सम्वन्धी शर्तहरुमा दुबै पक्षवीच सम्झौता भएको थियो ।
बिमान सेवा सन्चालन गर्ने समाचार सँगै विभिन्न नेताहरुले आ-आफ्नो पहलमा बिमान सेवा सन्चालन हुने भएको दाबी गर्दै प्रचारवाजी सुरु गरेका छन् । एकापसमा बधाई र धन्यवादको आदान प्रदान भैरहेको छ । बिमान सेवा सन्चालन गर्नमा आफनो उल्लेख्य योगदान रहेको दाबी समेत गर्न हानथाप चलेको छ ।
आजै चैत ७ गते नगरप्रमुख जनक पौडेलकोे अध्यक्षतामा बाउवासंघ, यातायात व्यवसायीहरुको संयुक्त बैठक बसी बागलुङ सदरमुकाम देखी बलेवा विमानस्थलसम्म जीप सन्चालन गर्ने सहमति भएको छ । यातायात व्यवसायीहरुले आउदो चैत दशै सम्म यात्रुलाई लान ल्याउन नि:शुल्क जीप सन्चालनमा ल्याउने सहमति जनाएका छन् ।
बलेवा-काठमाडौँ-बलेवा नियमित बिमान सेवा सन्चालन हुने कुराले खुशी मनाई रहेका नगरवासीले एकतर्फी विमानको भाडा रु ६७ सय निर्धारण गरिएको कुराले केहि सन्देह व्यक्त गर्दै के, कसरी, को संग, कुन शर्तका अधीनमा रहेर बलेवा-काठमाडौ-बलेवा बिमान सेवा सन्चालन गर्ने सम्झौता भएको छ ? ? जिल्लावासी, विमान कम्पनि वा नगरवासी कसको हित र फाईदाका निम्ती विमान सेवा सन्चालनमा ल्याउन खोजिएको हो ? आदि गम्भीर प्रश्नहरु नगरवासीले उठाएका छन् ।
अहिले पोखरा देखी काठमाडौ बिमानमा उडान भर्न प्रति यात्रुले न्यूनतम रु २ हजार २ सय देखी अधिकतम रु ४ हजार ८ सय भाडा दर कायम गरिएको छ । पोखरा विमान स्थलबाट काठमाडौ उडान भर्ने करीब दर्जन बिमान सेवाहरु सन्चालनमा रहेका छन् । यता काठमाडौ-बलेवा वा बलेवा-काठमाडौ उडानका लागि हप्तामा दुई उडान त्यस्मा पनि एकतर्फी उडान भाडा रु ६७ सय कायम गरिएको छ । यो सरकारी भाडा दर भन्दा ३३ प्रतिशतले बढी हो । यो भाडा दरले एकातिर यात्रुलाई मर्का पर्न जान्छ भने अर्कोतिर नगरपालिकालाई एकै उडानमा लाखौँ रुपयाँ व्ययभार पर्न जान्छ । किन कि, विमानलाई नपुग यात्रुको सम्पूर्ण भाडा रकम व्यहोर्ने शर्त त बागलुङ नगरपालिकाले विमान कम्पनि संग गरेकै छ । सरसर्ती हेर्दा, न यात्रुलाई हित, न नगरपालिकालाई फाईदा, सिर्फ विमान कम्पनिलाई मात्र पोस्ने नियतबाट प्रेरित भएर विमान सेवा सन्चालनमा ल्याउन लागिएको देखिन्छ । ट्याक्सी रिजर्व गरी पोखरा गएर विमानमा काठमाडौँ जाँदा पनि रु ६७ सय लाग्दैन भन्ने सबैले बुझेकै कुरा हो ।
बलेवा बिमानस्थलबाट चैत ९ गते देखी काठमाडौँ बिमान सेवा सन्चालनमा आउने खुशियालीमा नगरपालिका मख्ख छ । विमान सेवा सन्चालनमा ल्याउन बागलुङ नगरपालिकाले विमान कम्पनिहरुसंग गरेको गरेको सम्झौता पत्र पढ्ने हो भने एकातिर यात्रु महंगो भाडामा पर्ने, अर्कोतिर नगरपालिकाले यात्रु नभए खाली विमानको पनि रकम तिर्नुपर्ने प्रष्टै छ । केवल विमान कम्पनि (एयरलाईन्स) लाई मात्र फाईदा पुराएर सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्ने नेताहरुको चलखेल अब शनै:शनै: भण्डाफोर हुँदै जाने छ ।
२६ वर्ष देखी नियमित विमान सेवा सन्चालन नभएको बलेवा विमानस्थलमा विमानसेवा सन्चालन हुनु सुखद पक्ष हो तर बलेवाबाट काठमाडौ र काठमाडौबाट बलेवाका लागि उड्ने यात्रु नभएमा या नपुग भएमा पुरै वा नपुग यात्रुको पनि सबै भाडा नगरपालिकाले व्यहोर्ने जुन शर्तनामा (सम्झौता) नगरपालिका र विमान कम्पनिवीच भएको छ, त्यो सरसरती पढदा विमान कम्पनिलाई फाईदा पुराउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको प्रष्ट हुन्छ । विमान सन्चालनका लागि बलेवा बिमानस्थलमा आवश्यक कर्मचारी/कामदारको प्रवन्ध नगरपालिका स्वयंले गर्नुपर्ने सम्झौतामा किटान छ । यसबाट नगरपालिकालाई लाखौँको व्ययभार थपिने निश्चित छ । नगरपालिकाको विकासकालागि आएको रकम कुनै विमान कम्पनिलाई पोस्नु निश्चयपनि तर्कयुक्त मान्न सकिन्न ।
बच्चाबच्चीलाई खुशीपार्न खेलौनारुपी हवाईजहाज (विमान) ल्याईदिए जस्तो बलेवा काठमाडौँ विमान सेवा उडाउनु केटाकेटी खेल होईन । केबल सस्तो लोकप्रियता कमाउन,न जनहित, न नगरपालिकाको हित सिर्फ विमान कम्पनिको हितमा बागलुङ नगरापालिकाको लाखौँ बजेट कुनै विमान कम्पनिलाई पोस्ने काम हुनु एक प्रकारले भ्रष्टाचार नै हो ।
बागलुङ नगरपालिका र दुई विमान कम्पनि वीच भएको सम्झौता:
नेपाल एयरलाईन्स संग गरिएको सम्झौता पत्रको व्यहोरा यहि हो ।
बानपा, बाउवासंघ, यातायात व्यवसायीवीच चैत ७ गते भएको निर्णय
यु–१९ पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपमा सहभागिता जनाउन नेपाली युवा टोली प्रस्थान